Madaxweyne Xasan Sheekh iyo wefdi Wasiiro ah oo u amba baxay Magaalada Washington
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federalka ee Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wefdi uu horkacaayo, ayaa waxay gelinkii dambe ee maanta u amba baxeen Magaalada Washington ee dalka Mareykanka.
Madaxweynaha iyo wefdigiisa, ayaa waxay Magaalada Washington kaga qaybgalayaan shirka Madaxda Wadamada Afrika iyo Madaxweynaha Mareykanka Barack Hussein Obama, iyadoo uu soo qaban qaabiyay Madaxweyne Obama.
Shirkaan, ayaa waxaa ka qaybgalaaya inta badan Madaxweyne-yaasha Qaaradda Afrika, marka laga reebo Madaxweyne-yaasha Suudaan, Zimbabwe, Laberia iyo Sierra Leone.
Sababta waxaa lagu kala sheegay iyadoo aan shirkaan lagu soo casuumin Madaxweyne-yaasha Suudaan iyo Zimbabwe, halka Madaxda Sierra Leone iyo Laberia ay kaga baaqanayaan dalalkooda, oo uu ka dilaacay cudurka dilaaga ah ee Ebola.
Safiirka Somaliya ee dalka Mareykanka Amb. Cumar C/rashiid Cali, ayaa waxa uu sheegay in Madaxweynaha Somaliya ay Magaalada Washington si gaar ah isugu arki doonaan Madaxweynaha Mareykanka.
Madaxweyne Xasan Sheekh, ayaa markii ugu horeysay waxa uu khudbad ka jeedinaaya shirka ay yeelanayaan Madaxda Afrika iyo Madaxweynaha Mareykanka, waxaana looga hadlayaa arrimo ay ugu muhiimsan yihiin ammaanka, dhaqaalaha, horumarka iyo in leeska wada kaashado la dagaalanka argagaxisada.